भयमुक्त होली पर्व सँगै छाला र कपाल सुरक्षित गर्ने उपाय !! | भयमुक्त होली पर्व सँगै छाला र कपाल सुरक्षित गर्ने उपाय !! – हिपमत
भयमुक्त होली पर्व सँगै छाला र कपाल सुरक्षित गर्ने उपाय !!
कपाल र छाला हेरचाह संग भय मुक्त होली को मजा लिनुहोस् l
होली रंग, खुशी र आनन्दको पर्व हो।जब मानिसहरूले यो रङ्गीन पल साथीहरू, परिवार र आफन्तहरूसँग मनाउँछन् तर यही क्षण रङहरूमा मिसिएको रसायन वा होली खेल्न प्रयोग गर्ने रंगीन पानीका कारण ठूलो विपत्तिमा परिणत हुन सक्छ।
त्यस्ता रसायनहरूले आँखामा जलन, छालाको समस्या, कपाल बिग्रन सक्छ। तर होलीमा छालाको हेरचाहका टिप्सहरू समावेश गरी पहिल्यै राम्ररी तयारी गरेमा यस्तो प्रकोपबाट बच्न सकिन्छ।
स्किन र ब्युटी थेरापिस्ट आकाश अग्रवाल तपाईलाई होलीमा हुने क्षतिबाट जोगाउनको लागि केहि टिप्सहरू सुझाउन गइरहेका छन् । हामीले यो याद गर्नुपर्दछ कि “उपचार भन्दा रोकथाम उत्तम छ” र यदि संयोगले क्षति पहिले नै तपाईलाई भइसकेको छ भने पनि तपाईलाई चिन्ता लिनु पर्दैन, स्किन एण्ड ब्युटी थेरापिस्टका सुझाव र युक्तिहरू पनि समावेश गर्दैछौं जसले तपाईलाई क्षतिको सामना गर्न मद्दत गर्दछ।
होली अघि छाला र कपाल हेरचाह सुझावहरू
१) होलीको एक दिन अघि शरीरमा तेल लगाउनुहोस् । यसले तपाइँको छालालाई हाइड्रेटेड राख्छ र सुरक्षात्मक तहको रूपमा काम गर्दछ र तपाइँको छालामा रंग र रसायनहरू अवशोषित गर्नबाट रोक्छ।
नरिवलको तेल र बदामको तेल सबैभन्दा प्रभावकारी साबित भएको छ। बदामको तेलमा भिटामिन ई प्रचुर मात्रामा पाइन्छ र नरिवलको तेलमा एन्टिअक्सिडेन्ट र एन्टी-इन्फ्लेमेटरी गुण हुन्छ।
२). लामो बाहुलाको टप र फुल लम्बाइको ट्राउजर लगाउनुहोस् ताकि तपाईको छालालाई सीधै रंगको सम्पर्कमा आउन नदिन। सिंथेटिक कपडाहरू भन्दा सुती लुगाहरू राम्रो छन्। ती सबै रंगहरू प्राप्त गर्न जानु अघि लुगाहरू छोप्नुहोस्, भौतिक अवरोधले तपाईंको छालालाई उत्तम सुरक्षा दिन सक्छ।
३) आफ्नो छाला र अनुहारको खुला भागहरूमा बरफ लगाउनुहोस् ताकि तपाईंको छालाको छिद्रहरू बन्द गर्नुहोस्। छिद्रहरू बन्द गर्नाले रङहरू छालामा पर्नबाट रोक्न मद्दत गर्दछ।
४) यदि तपाईं बाहिर होली मनाउन जाँदै हुनुहुन्छ भने, SPF 40/50+ सनस्क्रिन जेल क्रीम अनिवार्य छ।
५) केमिकल रोक्न ओठ, कान र नङमा भ्यासलीन लगाउनुहोस्।
६) होली खेल्नुअघि अनुहारको छालामा राम्रो मोस्चराइजर लगाउनु सधैं राम्रो हुन्छ। मोइस्चराइजरहरूले छालामा सुरक्षात्मक अवरोध सिर्जना गर्दछ र कठोर होलीका रङहरू सुकाउने प्रभावहरूलाई रोक्छ, तपाईंले खेलिसकेपछि रङहरू हटाउन सजिलो बनाउँदछ।
१) कपाल र टाउकोमा नरिवलको तेल वा तोरीको तेल लगाउनुहोस्। यसले रङहरूलाई कपालमा टाँसिनबाट रोक्छ र होली पछि रङहरू सजिलै हटाउन मद्दत गर्दछ।
२) होली मनाउन बाहिर निस्कँदा कपाल खुला नराख्नु राम्रो हुन्छ । आफ्नो कपाललाई पोनीटेल वा जुडो बनको रूपमा बाँध्नुहोस् किनकि यसले तपाईंको कपालको थोरै भागलाई रंगहरूमा । यदि तपाईंलाई आफ्नो कपाल मनपर्छ भने, तपाईंले होली खेल्दा आफ्नो कपाल बाँध्नु पर्छ।
३)आफ्नो कपाललाई रसायनबाट जोगाउन (ब्यान्ड)स्कार्फ लगाउनुहोस्। कपालका सामानहरू प्रयोग नगर्नुहोस् किनकि यसले तपाईंको कपाललाई टाउकोबाट तान्न सक्छ।
४) यदि तपाइँको टाउको संवेदनशील छ भने,तपाईंले तपाइँको टाउकोमा कागतीको रस लगाउन सक्नुहुन्छ किनकि साइट्रिक एसिडले तपाइँको टाउकोलाई संक्रमण हुनबाट बचाउन मद्दत गर्दछ।
५)होली खेल्न बाहिर जानु अघि आफ्नो टाउकोमा सीरम लगाउनु आवश्यक छ। हामी केराटिन केयर हेयर सीरम सिफारिस गर्छौं। यसले तपाईंको कपाललाई कठोर रङ र सूर्यको किरणका हानिकारक प्रभावहरूबाट सुरक्षाको तह दिनेछ।
#आफ्नो नङ को लागी:-
यदि तपाईं होलीको दागको नङ लगाएर कलेज वा अफिसमा जान चाहनुहुन्न भने होली खेल्न बाहिर जानु अघि आफ्नो नङहरूमा पारदर्शी नङपोलिश धेरै कोटहरू लगाउनु राम्रो हुन्छ।
#होली पछि छाला हेरचाह सुझावहरू:-
१) अब, एकपटक तपाईंले त्यो दिनचर्या पालना गरिसकेपछि, होली पछि आफ्नो रंगहरू हटाउँदा चिसो पानी प्रयोग गर्नुहोस्। किनभने न्यानो वा तातो पानीले तपाईंको छालामा रङ टाँस्न र हटाउन गाह्रो बनाउँछ।
२).कृपया कस्मेटिक स्क्रबरहरूको प्रयोग नगर्नुहोस् किनकि यसले तपाइँको छालालाई नरम बनाउँछ। आफ्नो अनुहार सफा गर्न वा स्क्रब गर्न हल्का प्राकृतिक उत्पादनहरू वा हल्का आयुर्वेदिक उत्पादनहरू प्रयोग गर्नुहोस्। यदि तपाइँ होली पछि आफ्नो अनुहार स्क्रब गर्दै हुनुहुन्छ भने, एक पटक पर्याप्त छ। दिनमा २ वा ३ पटक स्क्रब गर्न नजानुहोस्!
३).तपाईंले आफ्नो अनुहारबाट होलीको रंगको पहिलो तह हटाउन आफ्नो मेकअप रिमूभर तरल वा पानी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
४). कम्तिमा तपाईंको होली पछिको नुहाउनको लागि, हल्का र साबुन-रहित फेस क्लिन्जरहरू छनौट गर्नुहोस्। किनभने तिनीहरूले तपाईंको छालाको प्राकृतिक नमी कायम राख्छन्।
५). होलीका रङहरू – यो प्राकृतिक होस् वा कृत्रिम होस्, छालाको खरोपन निम्त्याउँछ। होली एक वसन्त चाड हो र यसको मतलब केहि जाडो मौसम अझै पनि छ। त्यसैले, सुक्खा रंगको लगातार प्रयोग र पानीले धुँदा छालामा तेलको कमी हुन्छ। त्यसोभए, तपाईंको होली मनाउने एक हप्ताको लागि, धेरै राम्रो र बाक्लो बडी लोशन, बडी मोइस्चराइजर, वा बडी बटर प्रयोग गर्नुहोस्।
६).प्राकृतिक फेस प्याकको लागि जुन तपाईले घरमै बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईको छालाको रंगको साइड इफेक्टबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईं पककेको पपीता, गुलाब पानी, मह, र मुल्तानी माटो संग पपीता फेस मास्क तयार गर्न सक्नुहुन्छ। वा तपाईंले कागतीको रस र महको बराबर भागको मिश्रण प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र ५ मिनेटसम्म आफ्नो अनुहारलाई हल्का रूपमा मसाज गर्न सक्नुहुन्छ। वास्तवमा केराको बोक्रालाई रगड्दा पनि होलीको रंगबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ ।
#होली पछि कपाल हेरचाह सुझाव:-
१).होलीको रंगीन कपाल सफा गर्न चिसो पानी वा मनतातो पानी प्रयोग गर्नुहोस्। केवल नुहाउने मुनि उभिनुहोस् र सबै रङलाई पहिले प्रवाह गर्न अनुमति दिनुहोस्।
२.) माइल्ड स्याम्पु वा मिल्क प्रोटिन वा उच्च मोइस्चराइजिङ प्रभाव भएका शैम्पुहरू प्रयोग गर्नुहोस्। आफ्नो टाउको धेरै नखोल्नुहोस्। सरल रूपमा, हल्का मसाजको लागि जानुहोस् र धुनुहोस्।
३.) आफ्नो कपालमा राम्रो कन्डिसनर लगाउन नबिर्सनुहोस् र कम्तिमा १० मिनेटको लागि आफ्नो कपालमा कन्डिसनर दिनुहोस्। कन्डिसनरलाई १० मिनेटको लागि राख्दा तपाईंको कपाल नरम स्पर्श प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
४।होली पर्व पछि पूरै हप्ताको लागि, हरेक रात राम्रो तेल मालिस गर्न जानुहोस्। धेरै कोमलताको लागि बादाम, नरिवल, जैतून र क्यास्टर तेलको मिश्रण प्रयोग गर्नुहोस् वा यदि तपाइँसँग यी सबै छैन भने, नरिवल तेल मात्र जानुहोस्।
५).यदि होली पर्वपछि तपाईको कपाल धेरै सुख्खा भएको छ भने, तपाई राम्रो हेयर प्याक लिन सक्नुहुन्छ। १ कप काँचो दूध लिनुहोस् र त्यसमा १ चम्चा मह मिसाउनुहोस्। अब यो मिश्रणलाई कपालको जरादेखि टुप्पोसम्म लगाउनुहोस्। यसलाई आधा घण्टा वा १घण्टाको लागि राख्नुहोस् र मनतातो पानी प्रयोग गरी स्याम्पुसँग पछ्याउनुहोस् ।
स्किन एण्ड ब्युटी थेरापिस्ट _ आकाश अग्रवाल